onlineakhabar.com: हेर्नुहोस् भिडियो !! यस्तो घटना जुन हेर्दा तपाईको मुटु समेत काप्न सक्छ (भिडियो सहित)
Amazing News, Amazing Video, Amazing World, International, Lion, Video, Viral Video » हेर्नुहोस् भिडियो !! यस्तो घटना जुन हेर्दा तपाईको मुटु समेत काप्न सक्छ (भिडियो सहित)
हेर्नुहोस् भिडियो !! यस्तो घटना जुन हेर्दा तपाईको मुटु समेत काप्न सक्छ (भिडियो सहित)
कतिपय समाचारहरु बिश्वास गर्नै गाह्रो हुन्छ । यहाँ एउटा त्यस्तै एक भिडियो सहितको समाचार सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भैरहेको छ । जसमा दुई सिहंको अगाडी एक व्यक्ति खडा भएका छन् । जुन व्यक्तिको नाम ज्याङ हो च्याङ हो र यो घटना ताइवानको टाइपी ताइवान चिडियाखानामा भएको हो ।
प्रत्यक्षदर्शी जुलोजीस्ट जान्सेन मान्सानका अनुसार अचानक एक व्यक्ती मृत्युको खाडलमा हामफालेको जुन दृश्ष देख्दा निकै डरलाग्दो तथा अप्रत्याशित थियो । भिडियोमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ कि ति व्यक्ति आफ्नो हातमा ज्याकेट समातेर उभिरहेका छन् । अचानक सिंहले उनलाई झम्टने प्रयास गर्दछ उक्त प्रयासमा उनको हातमा रहेको ज्याकेट सिंहको पंजामा पुग्छ । यो आक्रमण बाट उनि खासै डराएको देखिंदैन केहि क्षणमै उनलाई सिहंले पुन: आक्रमण गर्ने प्रयास गर्दछ यो पटक उक्त व्यक्तिको हातमा आक्रमण गर्दछ त्यसपछिको केही क्षणमा तिघ्रामा पनि आक्रमण गर्दछ ।
केहि समयमा रेस्क्यु टोलिले निकै कौसलता पूर्वक उनलाई बचाउन सफल हुन्छन् पछि उनको स्वास्थ्य स्थिती बारे जानकारी लिंदा उनलाई गम्भिर चोट लागिसकेको देखिन्छ । हेर्नुहोस् भिडियो
Tags : Amazing News Amazing Video Amazing World International Lion Video Viral Video